Ọrụ anyị-Apicmo ndị na-emepụta ihe ndị dị ndụ
APICMO bụ onye na-azụ ahịa nke omenala omenala na nkwekọrịta R & D
Nkwekọrịta omenala na nkwekọrịta R & D
Obere ọnụahịa & nnukwu nhazi
Mwube ụlọ maka nchọpụta ọgwụ
Usoro R & D na ụzọ ọhụụ ọhụrụ
pịa a na
APICMO bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọgwụ na-ahụ maka ndị na-emepụta ihe maka ime nnyocha na mmepe nke oncology.
Anyị na-enye usoro mmemme na mmezi nke mmepụta ihe.
mmepụta ihe na ọrụ ndị ọzọ maka ịme ọgwụ na ụlọ ọrụ mmepe na ụlọ ọrụ ọgwụ
APICMO nwere ike inye ọrụ ndị na-esonụ, ndị iwu anyị siri ike na Nchebe nke Intellectual Property (IP) kwadoro ha niile, na-eme ka arụ ọrụ rụọ ọrụ na nkweke siri ike nke oge niile.
APICMO maka nchọpụta ọgwụ ọjọọ bụ igwe ojii, ihe ngwọta nke na-enyocha ihe ọmụma sayensị na data iji kpughere njikọ mara na nke zoro ezo nke nwere ike inye aka mee ka ohere nke sayensị mara.
N'ime afọ iri gara aga, APICMO nọ na-enye usoro omenala ndị a na-ahụkarị nakwa n'ichepụta ọrụ. Ogologo ọrụ anyị nwere ike ịnwe site na mpempe ọka milligram ka ọ bụrụ tọn nke ọrụ ịmepụta nnukwu ọnụahịa.
Ndi otu anyi na-acho ihe omuma ndi mmadu karia ndi 50 sayensi na mba anyi, karia otutu atumatu na obuna oru ndi kachasi ike. Na-arụ ọrụ na ụlọ akwụkwọ ntanetị ndị na-ahụ maka nhazi nke ejiji na usoro ihe nyocha.
Zọpụta ugbu a
APICMO bụ ụlọ ọrụ ọgwụ na-emepụta ndị na-emepụta ọgwụ ọhụrụ. Ọ na-elekwasị anya n'ịnye usoro zuru ezu nke mmepụta ihe na nke ahaziri iche maka ụlọ ọgwụ na ụlọ ọrụ mmepe na ụlọ ọrụ ọgwụ.
Ndị ọzọ ogige
Ahaziri ahazi ma kwenye R & D
Obere ọnụ ọgụgụ & Ntụziaka dị ukwuu
Ụlọ D, 2 n'ala, N'ihe 128, Xiangyin Road, Yangpu District, 200433, Shanghai, China
© Copyright 2019 APICMO. Echebere niile.